अब दिल्लीदेखि लण्डनसम्म बसमा यात्रा : विश्वकै सबैभन्दा लामो यात्रामा १८ देशको भ्रमण, भाडा २४ लाख लाग्ने - समृद्ध नेपाल
अब दिल्लीदेखि लण्डनसम्म बसमा यात्रा : विश्वकै सबैभन्दा लामो यात्रामा १८ देशको भ्रमण, भाडा २४ लाख लाग्ने
मलाई किन चा’हना बढी हुन्छ ? प्या’स बु’झाउने भए फोतो छुनुहोस् म म्यासेज गर्छु !
जोडी काम सुरु गर्नु भन्दा पहिले बोकेर घुमाए पछि ( भिडियो सहित )
मिठा मिठा कुरा गर्नको लागि नेपाली केटिहरुको मोबाइल नम्बर चाहिए फोटोमा क्लिक गरेर सम्पर्क गर्नुहोस् !
म भर्खर पुगे २० तर भर्खरको भन्दा ४० कटेको संग जाने मन्छ कोहि हुनु हुन्छ सम्पर्क नम्बर सहित !
म रात परे पछि आफुलाई कन्ट्रोल गर्नु सक्दिन कोहि हुनु हुन्छ मलाई कन्ट्रोल गर्ने ! परे पछि आफुलाई कन्ट्रोल गर्नु सक्दिन कोहि हुनु हुन्छ मलाई कन्ट्रोल गर्ने !
धेरै चिलाए पछि क्यामेरा अगाडी राखेर सुरु गरे भिडियोको लागि फोटोमा क्लिक गर्नु होस् !
योगा गर्ने तरिका देखे पछि योग गुरु परे छक्क भिडियोको लागि फोटोमा क्लिक गर्नुहोस !
महिलाले कसरी यौ,न स,न्तु,ष्टि प्राप्त गर्छन् ? के महिलाको पनि वी,र्य स्ख,ल,न हुन्छ ?
म यति गोरी छु तर मेरो त्यो भने कालो भएको छ किन होला ? भिडियोको लागि क्लिक गर्नु होस्
होटलमा बोलाएर शिक्षिकालाइ कर णी गर्ने एमालेका सांसदलाई पक्राउ पुर्जी जारी